के तपाई विदेशबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड — Imandarmedia.com
१अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अमेरिकामै तालिबान बनाइएपछि हंगामा
२ओलीको कुर्सी खोस्न ईश्वर पोखरेल सक्रिय, एमालेमा खैलाबैला
३ओलीलाई अर्को झट्का, भिम रावलको नेतृत्वमा अर्को २० प्रतिशतको खेल सुरू
४तेस्रो धारका नेताहरुसँग आँट र विद्रोह गर्ने हैसियत अलिकति पनि देखिएन, माधव नेपाल
५तेश्रो पटक संसद विघटन गर्दै देउबा सरकार, देशभर तरङ्ग
६कानुनभन्दा माथि क्रसर डन: सरकार निरीह
७अभिनेता सोनु सुदको कार्यालयमा कर विभागको छापा, कति छ सम्पत्ति ?
८कृषि मन्त्री शाही अर्की महिलासँग पनि लपक्कै, के होला अब ?
९को हुन् कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, के हो राष्ट्रपतिसँगको नाता ?
१०तालिबान शासनको एक महिना, जनजीवन कस्तो छ ? भिडियो सहित
११चीनको सिचुआनमा शक्तिशाली भूकम्प, के छ अवस्था ?
१२तालिबान नेता बरादर टाइम म्यागाजिनको सय प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा
६मधेसबाट लखेटिए उपेन्द्र यादव, ज्यान जोगाउन मुस्किल
७उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको भ्रष्टाचार काण्ड बाहिरियो, यस्तो छ रहस्य
८नेपालीको रगत उम्लिने गरी अमेरिकाले पठायो प्रश्नको उत्तर, आन्दोलनको आधिबेहरी आउने पक्का
९विमानस्थलमा लफडा, घुस मागेपछि असई र जवानको जागिर चैट
१०भुटानमा सत्ता कब्जाको प्रयास ! बरिष्ठ न्यायाधीश र सैनिक अधिकारी नियन्त्रणमा
११ताइवान कब्जा गर्ने चीनको चे’तावनी, १९ युद्धक विमान द्वारा हमला
१२सभामुखविरूद्धकाे मुद्धामा सर्वोच्चले के दियो आदेश ? प्रचण्ड तनावमा
के तपाई विदेशबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड
काठमाडौँ । के तपाईँ कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९)को महामारीको यो समयमा विदेशबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ? यदि आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले नेपाल सरकारले तोकेका केही मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकार कोभिड –१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरु विदेशबाट नेपाल आउँदा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ।
अहिले सरकारले चीन, टर्की र कतारका लागि हप्तामा एक दिन दुईतर्फी नियमित उडान खुलेको हो। ती देशबाट आउँदा नेपालीहरुले विभिन्न मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक जुनसुकै देशबाट नेपाल आएपनि तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने छ ।
विदेशबाट आउनेले के गर्ने ?
तपाईं विदेशबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले एउटा फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईले भर्ने फारममा विभिन्न मापदण्डहरु राखिएका छन् । फारममा तपाईंको व्यक्तिगत विवरण, पारिवारीक विवरण, यात्राको विवरण, हाल रहेको देशको विवरण, नेपाल फर्किएपछिको भावि योजना, स्वास्थ्य विवरणलगायत सोधिएको हुन्छ । त्यो सबै तपाईंले भर्नुपर्छ ।
तपाई जुनसुकै देशबाट नेपाल आएपनि १४ दिन अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइन वस्नु पर्ने हुन्छ । क्वारेन्टाइन कहाँ बस्ने भनेर तपाईंलाई ‘अप्सन’ दिइएको छ ।
पहिलो, तपाईं आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्नुहुन्छ । जसका लागि तपाईंले फारममै दिएको अप्सन अनुसार तपाई कुन होटल क्वारेन्टाइन बस्ने उल्लेख गर्नुपर्छ । दोस्रो स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा पनि बस्न सक्नुहुने छ । तेस्रो तपाई होम क्वारेन्टाइनमा पनि बस्न सक्नुहुने छ तर यसका तपाईंको पिसिआर नेगेटीभ प्रमाणित हुनुपर्छ ।
फारम कसरी भर्ने ?
– गुगल क्रोम (Google Chorme) वा फायरफक्स (Firefox) Web Browser बाट फारम भर्नुहोला । , – फारम भर्दा कुनै दुविधा भएमा Correction Support मा गई सही इमेल, राहदानी नं। आदि मागिएको विवरण राखी खुलस्त रूपमा के गर्नुपर्ने हो Feedback पठाउनुहोला ।
– रातो चिन्ह लगाइएका विवरण नछुटाई भर्नुहोला । सही विवरण उपलब्ध भएपश्चात मात्र उक्त इमेलमा थप जानकारी पठाइनेछ ।
– फारम भरिसकेपछिको तपाइँको System Generated Bar Code को Screenshot (Win + PrtSc) गरी वा Print प्रतिलिपि तुरुन्त सुरक्षित आफैँसँग राख्नुहोला ।
– यदी पहिला नै यो फारम भरिसकेको भए फेरी दोहोराएर नभर्नुहोस् । आफूले पहिले प्राप्त गरिसक्नुभएको Bar Code उल्लेख गरी अध्यावधिक गराउनु पर्ने विवरणलाई Correction Support मा गई भरेर पठाउनुहोला ।
– Flight बाट आगमन हुने यात्रुहरूको हकमा फारम भर्दा Flight Confirm भई PCR Report प्राप्त भइसकेपछि मात्र भर्दा उपयुक्त हुने ।
ओलीको कुर्सी खोस्न ईश्वर पोखरेल सक्रिय, एमालेमा खैलाबैला
ओलीलाई अर्को झट्का, भिम रावलको नेतृत्वमा अर्को २० प्रतिशतको खेल सुरू
तेश्रो पटक संसद विघटन गर्दै देउबा सरकार, देशभर तरङ्ग
अभिनेता सोनु सुदको कार्यालयमा कर विभागको छापा, कति छ सम्पत्ति ?
कृषि मन्त्री शाही अर्की महिलासँग पनि लपक्कै, के होला अब ?
को हुन् कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, के हो राष्ट्रपतिसँगको नाता ?